Wed, Jul 8, 2020 at 4:48pm
लज्जाको विषय ! अझै डोमलाई होटलको भाँडामा खान दिइँदैन, कहाँ लुक्यो कानुन ?
गौशाला, ३ भदौ मनरासिस्वा नगरपालिकामा अझै पनि डोम समुदायलाई होटलको भाँडामा खान नदिने गरिएको पाइएको छ । उक्त नगरपालिका–१ मनरा बस्ने प्रगास डोमले आफूहरूलाई यहाँका कुनै पनि होटलमा बस्न र त्यहाँको भाँडाकुडामा खानेकुरा खान नदिएको बताए । चार पुस्तादेखि मनरासिस्वामा बस्दै आएका उनीहरूले होटलमा जाँदा त्यहाँका सञ्चालकले प्रवेश गर्न नदिने र होटलको थाल, कचौरा र गिलासमा खानेकुरा खान र पानीसमेत पिउन नदिने..
वैज्ञानिकहरु गलत सावित ! जुन जीव खाना नखाई ३० वर्षसम्म बाँच्न सक्दछ
एजेन्सी, १ भदौ देख्दैमा अनौठो लाग्ने यस जीवको क्षमता झनै अकल्पनीय छ । यो जीवको अस्तित्व पत्ता लागेसँगै वैज्ञानिकहरु पनि नयाँ निष्कर्षमा पुग्न बाध्य भए । पृथ्वीमा प्रलय भएर एकदिन सबै जीवको अस्तित्व समाप्त हुनेछ भन्ने मान्यतालाई यो जीवले गलत सावित गरिदिनेछ । समुद्रमा पाइने यो जीव समुद्रको पिँधमा पनि बस्न सक्छ र यसलाई पानीको चापले पनि कुनै असर गर्दैन । वैज्ञानिकहरुले यो..
एजेन्सी, ३१ साउन पछिल्लो समयमा हरेक क्षेत्रमा नविन प्रविधीहरुको विकास भएको छ र यसको उचित प्रयोग हुनसके कुनैपनी क्षेत्रको विकास हुनमा लामो समय कुरी रहन पर्दैन । प्रविधिको विकासक्रमले कृषी प्रणालीमा पनि आमुल परिवर्तन ल्याउन सक्छ । विकशित देसहरुमा प्रविधीकै प्रयोगले गर्दा छोटो समय अनी थोरै लगानीमा प्रसस्त उत्पादन गरेर निर्वाहमुखी उत्पादन प्रणालीलाई ब्यबसाहीक रुपमा विकास गरिएको छ । अत नेपाल पनि..
विचित्र पात्र ! जसलाई ११ हजार भोल्टको करेन्टले पनि छुँदैन, कारण रहस्यमय
एजेन्सी, ३० साउन भारतको हरियाणस्थित सोनीपतमा बस्नेएकजना युवक यस्ता छन् जसलाई ११ हजार भोल्टको करेन्टले पनि कुनै असर गर्दैन । सोनीपतमा बस्ने १९ वर्षका दीपक जांगडा दुनियाँका एक विचित्र पात्र हुन् । २७ सय भोल्टको करेन्ट कुनै पनि मानिसलाई मृत्युको मुखमा पूराउन पर्याप्त हुन्छ । तर दीपकलाई भने ११ हजार भोल्टको करेन्ट लगाइदिँदा पनि कुनै असर हुँदैन । स्मरण रहोस् ११ हजार भोल्टले..
जो पुरुषले सबैभन्दा ठूलो माछा पक्रेर ल्याउँछ, उसले रोजेको केटी पाउँछ !
एजेन्सी, २९ साउन यौन सम्बन्ध दुनियाँको सबैभन्दा प्राचीन र सार्वभौमिक चलन हो । तर संसारका विभिन्न देशमा सेक्सका तरिकाहरुमा निकै विविधता छ । बीबीसीको एक कार्यक्रम क्रसिंग कन्टिनेन्टले यस विषयमा शोध गरेको थियो । त्यसक्रममा यौन सम्बन्ध कायम गर्नका लागि के–के सम्म गरिन्छ भन्ने रोचक तथ्यहरुको खुलासा गर्यो । यौन तथा प्रजनन सम्बन्धी विश्वका केही रोचक ९ तथ्यहरु यस्ता छन्ः १. अमेरिकाको हवाई..
कहाँ बन्यो आइसक्रिम ? यस्तो छ आइसक्रिमको भित्रि कथा
एजेन्सी, २८ साउन गर्मीको यो मौसममा आइसक्रिमको कुरा गर्दा जिउ नै हुरुक्क हुन्छ । हामीले निकै मिठो मानीमानी खाने यो आइसक्रिम सबैभन्दा पहिले कुन देशमा बनाइयो होला, तपाइँलाई थाहा छ ? तपाइँ हामीमध्ये सायद धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ कि दुनियाँमा सबैभन्दा पहिले आइसक्रिम बनाउने देश इरान हो । आजभन्दा दुई हजार वर्ष पहिलेदेखि नै इरानमा आइसक्रिम खाने चलन रहेको बताइन्छ । रेफ्रिेजेरेटर वा बरफ जमाउने..
राम-राम यस्तो बिजोग ! आफ्नै मृत्यु दर्ता बोकेर इन्साफ माग्दै
बर्दिवास, २७ साउन ‘‘हजुर ! हम बर्बाद भगेलौँ, जिन्दे मे मरल ।” (हजुर, म बर्बाद भएँ, जिउँदै मरेको) महोत्तरी जिल्लाको औरही नगरपालिका–६ खोपी बैरियाका ५९ वर्षीय रामसेवकराय यादव अचेल जसलाई भेट्दा पनि यस्तै बिलौना गर्छन् । आफ्नो हातमा आफ्नै मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र बोकेर इन्साफका लागि विभिन्न कार्यालय धाउने यादव आफन्त, छिमेकी, कार्यालयका कर्मचारी, राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई मात्र नभएर अपरिचित मानिस..
गुफाबाट उद्धार गरिएका बालकहरुको मन्दिरमा राखेर ९ दिन सम्म शुद्धीकरण, किन ?
एजेन्सी, २५ साउन थाइल्याण्डमा गुफाभित्र फसेका १२ बालकहरु र उनीहरुका १ जना शिक्षकको उद्धार गरिएको विषय अन्तराष्ट्रिय रुपमा निकै चर्चाको विषय बन्यो । मृत्युको मुखबाट उम्केर आएका ती विद्यार्थीहरु अहिले के गर्दै होलान् ? समाचार अनुसार हामीले कल्पना नै नगरेको प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेका छन् उनीहरु । अहिले ती विद्यार्थीहरु र उनका शिक्षकलाई मन्दिरमा राखेर शुद्धीकरण गर्ने काम चलिरहेको छ । एकजना इशाई बच्चालाई..
हाम्रै नेपालमा : इलाम निवासी गोमा थापाले खुल्ला सडकमै यसरी बच्चा जन्माएपछि....
इलाम, २३ साउन : एक महिलाले सडकमै शिशु जन्माएकी छिन् । इलाम नगरपालिका–३ निवासी रामचन्द्र थापाकी श्रीमती गोमा थापाले आज दिउँसो सडकमै शिशुलाई जन्म दिएकी हुन् । सुत्करी बेथा लागेपछि अस्पताल लैजाँदै गर्दा मेची राजमार्गको पुवाखोला बजारमा गोमाले स्थानीय महिलाकै सहयोगमा शिशु जन्माइन् । इलाम नगरपालिकाका–४ का अध्यक्ष नुतनदेव दुलालका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाका लागि स्वास्थ्य संस्था टाढा भएकै..
५० मिनेटमा ३ परौंठा सकेमा जीवनभर सित्तैमा खान पाइने
एजेन्सी, २३ साउन परौंठा भन्नेबित्तिकै मुख रसाउँछ होला सबैको । सायद मानिसहरुको परौंठा प्रतिको लगाव देखेरै होला छिमेकी मुलुक भारतमा परौंठा खाजाघरका व्यापारीले यस्तो स्कीम ल्याएका छन् जो सुन्दैमा जाउँ–जाउँ लाग्छ । हरियाणाको रोहतकमा खुलेको एक परौंठा खाजाघरले यस्तो अफर ल्याएको छ, जुन निकै अनौठो छ । उक्त अफर अनुसार, यदि कसैले ५० मिनेटमा ३ वटा परौंठा खान सकेमा त्यस व्यक्तिलाई जीवनभर सित्तैमा..
थाहा पाउनुहोस् ! अब बच्चाले गभावस्र्थामै अंश पाउने नयाँ व्यवस्था भदौ देखि शुरु
काठमाडौँ, २२ साउन हालसम्म सगोलको सम्पति बच्चा जन्मिएपछि मात्र भाग लगाउने गरिन्थ्यो तर अब भने बच्चाले आमाको गर्भमा रहँदा नै अंश पाउने भएका छन् । आगामी भदौ १ देखि लागू हुन लागेको मुलुकी देवानी (संहिता), २०७५ र त्यससम्बन्धी कार्यविधिमा अंशबण्डा गर्दाका बखत कुनै महिला अंशियार गर्भवती भएमा ती महिलाले जन्माउने शिशुलाई पनि अंश छुट्टयाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । सगोलको सम्पत्तिमा पति, पत्नी,..
प्रहरीको आग्रह - 'ठूला कुकुरलाई बुट लगाइदिनुस्, सानालाई आफैँ बोक्नुस्’
एजेन्सी, २१ साउन स्वीट्जरल्याण्डको जुरिच शहरमा प्रहरीले कुकुरका लागि जुत्ता किन्न मालिकहरूलाई आग्रह गरेको छ। जुरिचमा शहरमा उच्च तापक्रमबाट कुकुरको पैताला जोगाउन प्रहरीले तीनका मालिकलाई आग्रह गरेको हाे। जुरिच प्रहरीले कुकुरको पक्षमा अभियान नै चलाएको छ। कुकुरका मालिकहरूलाई चर्को गर्मीमा उनीहरूका 'चारखुट्टे साथी'लाई जोगाउने काइदाबारे प्रहरीले सिकाइरहेको छ। चर्को घामले तातेको फुटपाथमा हिँड्नु कुकुरको निम्ति पीडादायी हुनसक्ने तर्क प्रहरीको छ । युरोपभर..
चीनले बन्द गर्दैछ सबैभन्दा ठूलो मानव निर्मित झरना ! तर किन ?
एजेन्सी, २० साउन दक्षिण पश्चिम चीनमा एक गगनचुम्बी महलमा बनाइएको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मानव निर्मित झरना बन्द हुने भएको छ । अत्यधिक खर्चका कारण झरना सञ्चालन गर्न अप्ठेरो भएसँगै बन्द गर्न लागिएको हो । यो झरनाले पर्यटकबाट हुने आम्दानीबाट यसको सञ्चालन खर्चसमेत उठाउन नसकेपछि यो सेतो हात्ती बन्दै गएको थियो । जसका कारण यो झरना अहिले चीनमा मजाकको विषय बन्ने गरेको छ ।..
यात्रुको जीवन भगवानको हातमा ! उडिरहेको जहाजमा पाइलटबीच हानाहान
एजेन्सी, १८ साउन इराक एयरवेजले आफ्ना दुईजना पाइलटलाई निलम्बन गरेको छ । आकाशमा ३७ हजार फिटमाथि जहाज उडाइरहेको बेलामा एक आपसमा मुक्कामुक्की गरेको आरोपमा ती दुई पाइलट निलम्बनमा परेका हुन् । समाचार अनुसार १ सय ५७ यात्रु बोकेर इरानको मशादबाट इराकको बगदादका जाँदै गरेको विमानभित्र चालक दलका दुई पाइलट आपसमा झगडा गरी पिटापिटमै उत्रिएका हुन् । उक्त घटनाको अनुसन्धानका क्रममा विमानका सह–पाइलटले इराकी..
श्रीमानको हातमा प्रेमिकाको नामको ट्याटु, श्रीमतीले गरिन् रामधुलाई !
एजेन्सी, १७ साउन विवाहको पाँच दिनपछि श्रीमतीले श्रीमानको हातमा प्रेमिकाको नामको ट्याटु देखेर आफ्नो रिस नियन्त्रण गर्न सकिनन् । बस स्टपमा मानिसहरुको भीडको बीचमा नै उनले श्रीमानलाई कुट्न सुरु गरिन् । श्रीमान्ले भाग्ने निकै कोसिस गरे तर उनी श्रीमतीको रिसबाट बच्न सकेनन् । भारतमा बस्ने २२ वर्षकी नवविवाहित आफ्ना २० वर्षका श्रीमानसहित बस स्टपमा बसेकी थिइन् । त्यतिबेला नै उनको नजर श्रीमानको..
कक्षा ५ मा १ विद्यार्थी ५ शिक्षक ! बर्सेनि विद्यार्थीको संख्या किन घट्दै छ ?
जाजरकोट, १७ साउन डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका– १ रल्लीमा रहेको महाकवि आधारभूत विद्यालयको कक्षा पाँचमा एक विद्यार्थीलाई पढाउन पाँच शिक्षक खटिएका छन् । उक्त विद्यालयको कक्षा एकमा पाँच, कक्षा दुईमा नौँ, कक्षा तीनमा १०, कक्षा चारमा पाँच र कक्षा पाँचमा एक जना विद्यार्थी पढ्दै आएका छन् । विद्यालयमा पनि पाँचै शिक्षकको दरबन्दी छ । स्थापनाकालदेखि उक्त विद्यालयमा कक्षा कोठा, खानेपानी र शौचालय नहुँदा दैनिक..
गाउँका नाम पनि कस्ता–कस्ता ? संसदमा हंगामा, सांसदलाई लाज मर्नु
एजेन्सी, १६ साउन घानाको संसदमा हालै एउटा अनौठो घटना भएको छ । एकजना सांसदले केही गाउँहरुको नाम भनिरहँदा संसदमा हंगामा भयो, सांसदहरु लाजले भुतुक्कै भए र शव्दैपिच्छे हाँसिरहे । महिला सांसदहरु त झनै लाजले रातोपिरो भए । सांसद फ्रिम्पोंग ओसेइले संसदमा बोल्ने क्रममा जब आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका गाउँहरुका नाम उच्चारण गर्न थाले, तब सांसदहरु अनौठो तथा लाज मान्दै हाँसिरहे । नहाँसुन् पनि किन..
के तपाई प्रेममा हुनुहुन्छ, सावधान ! २० ब्वायफ्रेण्डका आइफोन बेचेर युवतीले किनिन् घर
एजेन्सी, १५ साउन अहिलेको जमानामा मानिसहरुलाई कोभन्दा को कम भन्ने नशा नै लागेको छ । प्रतिस्पर्धाको यो युगमा अघि बढ्न वा चाहेको कुरा प्राप्त गर्नका लागि कोही मानिसहरुले निकै स्मार्ट तथा इमान्दार बाटो अपनाउँदछन् तर केही मानिसहरु जुनसुकै हदसम्म गिर्न तयार हुन्छन् । चीनमा हालै यस्तै घटना सार्वजनिक भएको छ । जसमा एक युवतीले घर किन्नका लागि एक दुई होइन २० जना..
१ अर्ब नोक्सान गराउने कुकुरलाई जिउँदो वा मुर्दा समात्नेलाई ८० लाख इनाम (भिडीयो)
एजेन्सी, १४ साउन कोलम्बिया ड्रग तस्किरीले वर्षौ देखि जडा गाडेको छ। ड्रग तस्करबाट हैरान भएको यहाँको प्रहरीले अहिले एउटा नयाँ तरिका अपनाएको छ। त्यो के भने ड्रग तस्करलाई नियन्त्रण गर्न सोंब्रा नाम को एउटा कुकरलाई परिचालन गरिएको छ। यो कुकरले २ वर्ष मा १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको ड्रग समाउन मद्धत गरेको छ। अनि यो विशेष कुकरबाट हैरान भएका..
चोरको हजार दाउ ! सुनको सिक्री निलेर चोरी गर्ने युवा विराटनगरबाट पक्राउ
विराटनगर, १२ साउन : “चोरको हजार दाउ” भने जस्तै विराटनगरमा एक जनालाई सुनको सिक्री निलेर चोरी गरेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । विराटनगर महानगरपालिका–९ स्थित राठी सुन पसलमा सिक्री किन्ने बहाना बनाई सुन किन्न आएका इटहरी उपमहानगरपालिका–२ बस्ने ३१ वर्षीय सुरजकुमार नेपालले पसलमा गएर सुनको सिक्री खरीद गर्ने भन्दै ऐना हेरी गलामा लगाउने बहानामा सिक्री निलेर पाइन्टको गोजीमा आफूसँग भएको..
एजेन्सी, ११ साउन डिभोर्स गरेकी आफ्नी पूर्व पत्नीलाई पुरुषले दिने गुजारा अर्थात् मानाचामल बापतको रकम कति होला ? नाम नै गुजारा भत्ता भनेपछि त्यो सानो रकम नै होला भन्ने अनुमान हुन्छ । तर भारतमा एउटा यस्तो घटना भएको छ, जहाँ एकजना महिलालाई उनका पूर्व पतिले दिएको गुजारा भत्ताको रकम अदालतको इजलासमा दिनभर गन्दा पनि सकिएन । सायद दिनभर गन्दा पनि नसकिने भनेपछि त्यो..
सुत्केरी भैँसीलाई भत्ता ! दूध उत्पादन वृद्धि गर्ने मुख्य उद्देश्य
बाबियाचौर, म्याग्दी, १० साउन मंगला गाउँपालिकाले सुत्केरी भैँसी पाल्ने किसानलाई पोषणभत्ता उपलब्ध गराउन थालेको छ । सुत्केरी अवस्थाका गाईभैँसीको स्याहारसुसार र आहरामा ध्यान दिनुपर्ने सन्देश प्रवाह गराउनका लागि पशु आहरा सुत्केरी भत्ता वितरण गरिएको हो । यसवर्ष १९ भैँसीपालक कृषकलाई रु तीन हजारका दरले सुत्केरी भत्ता उपलब्ध गराइएको गाउँपालिकाका पशुसेवा शाखाका प्रमुख दीर्घबहादुर खड्काले जानकारी दिए । कुहुँका आठ, बाबियाचौरका एक र बरंजाका..
कृष्ण भगवानको प्रेरणा भन्दै सांसदले भित्राए ५८ श्रीमती, जबकी पत्नीको नाम पतिलाई थाहैंछैन !
एजेन्सी, ८ साउन ५ पटक सांसद् तथा मन्त्रीसमेत भइसकेका एक व्यक्तिले जीवनमा ५८ वटी महिलासँग बिहे गर्लान् भन्ने कल्पना सायदै गर्न सकिएला । तर बागुन सुम्ब्रुइ नामका व्यक्तिले भने धेरै सांसद् तथा मन्त्रीले गर्न नसकेको काम गरिदिए । उनले आफ्नो जीवनकालमा ५८ जना श्रीमती भित्राए । उनले यतिधेरै पत्नी बनाए कि जीवनको अन्तिम समयसम्म आइपुग्दा उनलाई आफ्ना सबै पत्नीको नामसम्म याद..
आफ्नो बच्चालाई खेलौना कतिको दिनुहुन्छ ? होस् गर्नुहोस्, हानिकारक रसायनहरु पाइयो !
काठमाडौँ, ७ साउन सोमबार जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रर्वद्धन केन्द्रले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘बालबालिकाको खेलौनाहरुमा उच्च स्तरमा हानिकारक रसायनहरु पाईएकोले राष्ट्रिय मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्कत्ता’ बारे आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रममा बोल्दै भन्सार विभाग प्रमुख मनोजनिधि वाग्लेले सिमानामा अस्वस्थ्यकर सामग्रीहरु प्रेवशमा प्रभावकारी रुपमा लागेको बताएका छन् । सेफेडका कार्यकारी निर्देशक एवं वातावरण वैज्ञानिक राम चरित्र साहको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने, व्यापार घाटा..
जन्मियो एसियाकै सबैभन्दा सानो बच्चा ! ३ सय ७५ ग्राम मात्र, डाक्टरहरु नै हैरान
एजेन्सी, ७ साउन सोसल मिडियामा हालै एक खबरले तहल्का मच्चाइरहेको छ । भारतमा दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एसियाकै सबैभन्दा सानो बच्चा जन्मिएको छ । हैदराबादस्थित रेन्बो हस्पिटलमा हालै ३७५ ग्रामको बच्चा जन्मिएको छ । आखिर त्यति सानो बच्चा कसरी सकुशल जन्मियो भनेर डाक्टरहरु नै हैरान छन् । डाक्टरका अनुसार सामान्य तालिका भन्दा ४ महिला पहिले बच्चीको जन्म भएको हो । बच्चीको लम्बाई २०..
गायब हुने 'छालाको जादुगर', आफ्नो जीउ रङ्ग्याउँछिन् र आफूलाई गायब पर्छिन् !(भिडीयो)
​एजेन्सी, ६ साउन यी सर्बियाली मेकअप कलाकार दृष्टिभ्रम सिर्जना गर्न आफ्नो जीउ रङ्ग्याउँछिन् र आफूलाई गायब पार्न सक्छिन् । ति कलाकार भिडीयोमा स्पस्ट देख्न सक्नुहुन्छ । ..
गाई पाल्नुस्, पाउनुस् सुत्केरी भत्ता ! किसानहरु खुशीले गदगद्
रत्ननगर, चितवन, ४ साउन रत्ननगर नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षबाट गाईलाई सुत्केरी भत्ता कार्यक्रम शुरु गरेको छ । नगरपालिकाको पशुपक्षी शाखाका प्रमुख शालिग्राम पौडेलका अनुसार साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी गाईलाई सुत्केरी भत्ता दिन शुरु गरिएको हो । “अब साउन १ गतेबाट ब्याएका गाईले भत्ता पाउनेछन्, नगरपालिकाबाट पारित भइसक्यो, कार्यविधि बनेपछि वितरण शुरु हुन्छ तर त्यसका लागि प्रमाण भने पुर्याउनुपर्ने हुन्छ” उनले भने..
कस्तो अनौठो पर्व: बलेको आगोमा दौडिने, ज्वालामूखीमा अन्न फ्याँक्ने
एजेन्सी, ३ बिहिबार इण्डोनेसियाको एक विशेष पर्व जुन आश्चर्य लाग्दो छ । जसको नाम हो यादन्या कासदा । यो त्यहाँको विशेष पर्व हो । यो पर्वमा गरिने क्रियाकलाप झनै विशेष छन् । विशेष मात्र होइन, खतरनाक पनि छन् । यस पर्वका अवसरमा मानिसहरु फाटिरहेको ज्वालामूखीबाट बलेको आगोमा हाम फाल्छन्, दौडिन्छन् । यस पर्वका अवसरमा यहाँको पहाडलाई भगवान मानिन्छ । किनकी पहाडले मानिसहरुलाई खाद्यान्न उपलब्ध..
किन अशुभ मानिन्छ १३ नम्बर के छ कारण ? यस्तो छ वैज्ञानिक तथ्य !
एजेन्सी, २ साउन दुनियाँमा १३ अंकलाई अशुभ मानिन्छ । आखिर किन ? १३ नम्बरको रहस्य के छ ? मानिसहरु यो अंकको प्रयोग गर्नमै हिच्किचाउनुको कारण के छ ? अझ पश्चिमी देशहरुमा १३ अंक प्रतिको विकर्षण र त्रासले आम मानिसमा जरो गाडेको पाइन्छ । १३ नम्बरप्रति यस्तो भय सिर्जना हुनमा धेरै घटना तथा संयोगहरु छन् । ती संयोगहरुले यस्तो माहोल सिर्जना गर्‍यो कि..
खतरनाक सर्पले डसेको युवकलाई बचाउन अस्पतालका डाक्टरले लगाइदिए ८० सुई !
एजेन्सी, १ साउन भारतमा हालै एउटा यस्तो घटना भएको छ, जहाँ डाक्टरले सर्पको तस्वीर देखेको भरमा विरामीलाई लगातार ८० पटक सुई लगाइदिएका छन् । घटना भारतको मध्यप्रदेशस्थित धार जिल्लाको हो । स्थानीय एक गाउँका युवकलाई सर्पले डस्यो । सुरुमा उनलाई झारफुक गरियो । तर निको नभएपछि स्थानीय अस्पताल लगियो । ती युवकको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको थियो । डाक्टरहरु तुरुन्तै उनको उपचारमा..
Results 603: You are at page 17 of 21